NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာသတင်းများ 968 ၏စာမျက်နှာ 37554 | ၂၀၂၀ NAB Show News: တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ။ NAB ပြရန် 2020 ။
ATSC 3.0 ရေစာ Toolset အပေါ် Verance အတူ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်အပေါင်းအဖေါ်များ
ဟာ Off comments ATSC 3.0 Watermark Toolset တွင် Verance With Triveni Digital Partners အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်
PRINCETON, NJ - ၂၀၁၇ Aprilပြီလ ၂၂ ရက် - Triveni Digital သည် Verance ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီး Verven Aspect၊ AtSC 22 ရုပ်မြင်သံကြားစံ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောထုတ်လွှင့်သူများကယနေ့ ATSC 2017 ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Triveni ၏လုပ်ငန်းခွင် ဦး ဆောင်မှုတွင်ပေါင်းစပ်နိုင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ StreamScope (R) MT-3.0 ဗီဒီယို၊ အသံနှင့် metadata စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်စိစစ်ခြင်းစနစ်။ Triveni Digital သည်တီဗီများနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများရှိတိုင်းတာမှု၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်အရေးပေါ်အချက်ပေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် Aspect audio open watermark solution ကိုပထမဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာမှုပြုလုပ်သူဖြစ်သည်။ Orlando တွင်ရှိသော Fox's WOFL သည် StreamScope အားစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်ပထမဆုံးသောဘူတာရုံဖြစ်လာသည်။
AccuWeather သည် NAB 2017 တွင်အားလုံး - StoryTeller Interactive Touchscreen Solution တီထွင်မှုများအားလုံးကိုစတင်သည်
ဟာ Off comments AccuWeather မှအသစ် StoryTeller Interactive Touchscreen Solution Innovations ကို NAB 2017 တွင်စတင်ခဲ့သည်
AccuWeather သည်တက်ရောက်လာသူများကို NAB Booth # SL6816 တွင်တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြခြင်းဖြင့်လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဖိတ်ကြားသည်။ AccuWeather ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုစင်တာ - Aprilပြီလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၇ - ရာသီဥတုသတင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာလောက၏ခေါင်းဆောင် AccuWeather သည်ယနေ့StoryTeller®၏တစ်ခုတည်းသောပြီးပြည့်စုံသော၊ အပြန်အလှန်ထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်ဖြေရှင်းချက်အတွက်သိသာထင်ရှားသည့်တီထွင်မှုများကိုကြေငြာခဲ့သည်။ AccuWeather သည် StoryTeller ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်တိုးတက်မှုများကိုပြသသည်။ ၎င်းသည်ပြည်တွင်းရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများယှဉ်ပြိုင်မှုမတိုင်မီဆက်လက်ရပ်တည်ရန်နှင့်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များကိုတိုးပွားစေရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာ National Broadcasters of Show (Booth # SL25) ပြခန်းတွင်ဖြစ်သည်။ StoryTeller ၏ထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာတိကျမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောပရိသတ်ပလက်ဖောင်းများသည်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာအပြုအမူများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Broadpeak nanoCDN Multicast ABR 2.0 ၏ Launch နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုလွှ Transform မှ Continues
ဟာ Off comments nanoCDN Multicast ABR 2.0 စတင်ခြင်းဖြင့် Live Video Streaming ကို Broadpeak တွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်
RENNES, ပြင်သစ် - ၂၀၁၇ Aprilပြီ ၂၀ - Broadpeak (R) သည်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေသည့်ကွန်ယက် (CDN) ၏ထိပ်တန်းပံ့ပိုးပေးသောနည်းပညာများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများနှင့်လစာရုပ်မြင်သံကြားအော်ပရေတာများအတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်ဗွီဒီယိုတောင်းဆိုမှု (VOD) ဆာဗာများကိုယနေ့ကြေငြာလိုက်သည်။ ၎င်း၏ groundbreaking nanoCDN (TM) ဖြေရှင်းချက်၏ဗားရှင်း။ nanoCDN multicast adaptive bitrate (ABR) 20 ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သန်းပေါင်းများစွာသော broadband gateway များ၊ cable modem များ၊ Wi-Fi router များသို့မဟုတ် set-top boxes (STBs) များကိုအော်ပရေတာတစ် ဦး ၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ပေးသော HTTP ဗွီဒီယိုကိုပြုလုပ်သည်။ အကြောင်းအရာပေးပို့အခြေခံအဆောက်အအုံ။ Live ဗီဒီယို streaming နှင့် latency နိမ့်ခြင်းအပါအ ၀ င်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်ကုန်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
MultiDyne 2017 NAB ပြရန်၏ကြိုတင်အတွက်နယူး HammerHead အီလက်ထရောနစ်တိုင်းနှင့် Fiber Lab မှအာဏာတည်
ဟာ Off comments on MultiDyne Establishes New HammerHead Electronics Division and Fiber Lab in Advance of 2017 NAB Show
New distribution business to focus on accessories, support products for studio and field production; Fiber Lab will focus on cable manufacturing and assembly Hauppauge, NY, April 20, 2017 — MultiDyne Video & Fiber Optic Systems today announces two new strategic business initiatives that will provide its global broadcast, production and digital cinema customers withamultitude of options to purchase complete fiber transport solutions. This includesanew online and call-in distribution business, HammerHead Electronics, which will focus on accessories and support products; and the MultiDyne Fiber Lab, which will manufacture, assemble and quality-assure SMPTE and tactical cables in house. ...
ဖျော်ဖြေရေးဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်, INC ။ (ECN), အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု
ဟာ Off comments on ENTERTAINMENT COMMUNICATIONS NETWORK, INC. (ECN), CERTIFIED AS A WOMEN’S BUSINESS ENTERPRISE
Broadcast traffic leader proud to exemplify the powerful potential of women-owned companies in the advertising industry LOS ANGELES, CA (April 19, 2017) – Entertainment Communications Network, Inc., (ECN) has received national certification asaWomen’s Business Enterprise by the Women’s Business Enterprise National Council (WBENC). “We are pleased to count ECN as one of over 11,000 certified Women’s Business Enterprises in the U.S.,” said Dr. Pamela Williamson, President of the WBENC – West. The national standard of certification includes an in-depth review of the business as well asasite inspection. The process is designed to confirm that the business ...
High-ပါဝါနှင့်အတူ APT Panel ကိုအင်တင်နာ, 2017 NAB Show မှာ Broadband စှမျးပွဲဦးထွက်မှ Dielectric
ဟာ Off comments Dielectric မှ 2017 NAB Show တွင် High-Power, Broadband စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော APT Panel Antenna ကိုမိတ်ဆက်မည်
APT စီးရီးအင်တင်နာသည်Hပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၇ - lectပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၇ - တီထွင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်သည့်အင်ဂျင်နီယာတီထွင်သူ Dielectric တီထွင်ထားသောတီဗီအတွက်ရေဒီယိုလှိုင်းပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည့်ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးစွန်း polarization UHF အတွက်စွယ်စုံသုံး dual-input broadband panel စနစ်ဖြစ်သည်။ နှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်သူများက၎င်း၏မြန်နှုန်းမြင့် APT Panel Antenna ကို Las Vegas တွင်Aprilပြီ ၂၄ မှ ၂၇ ရက်အထိကျင်းပမည့် 18 NAB Show တွင်ပြသမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Booth C2017 တွင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပြသသည်။ APT Panel Antenna သည်ယခုလအစောပိုင်းတွင်ကြေညာခဲ့သည့် TFU-GTH-BB high-power broadband pylon အင်တင်နာအပါအ ၀ င် Spectrum Repack နှင့်အတူတီထွင်ထားသော Dielectric antenna အသစ်သုံးခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dielectric APT ဒီဇိုင်း ...
Audinate နယူး Dante ဘရော့ဒ်ဝေး™ကွန်ယက်အဖွဲ့ Chip မိတ်ဆက်
ဟာ Off comments on Audinate Introduces New Dante Broadway™ Networking Chip
New addition to Dante solution portfolio optimizes price and performance for mid-channel count applications PORTLAND, Ore., April 19, 2017 — Audinate, developer of the industry-leading Dante™ media networking technology, has announced the immediate availability of its new Dante Broadway™ networking chip designed for mid-channel count audio products. Available in 8×8 and 16×16 channel options, Dante Broadway is ideal for adding Dante audio networking to products such as small mixers, power amplifiers, DSPs, hardware interfaces and conferencing solutions. Dante Broadway blends the small form factor of Audinate’s renowned Ultimo products with the most popular features of the powerful Brooklyn II ...
Ernesto Fajardo ကာရစ်ဘီယံများအတွက်အရောင်းဒါရိုက်တာနှင့်လက်တင်အမေရိကန်ဒေသကြီးအဖြစ် GatesAir ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဟာ Off comments on Ernesto Fajardo Joins GatesAir as Sales Director for the Caribbean and Latin American Region
As broadcasters across the CALA region face significant technological shifts, Mr. Fajardo sees enormous opportunities and demand for the advanced DTV, FM radio, and Audio over IP solutions that comprise the GatesAir brand CINCINNATI, April 19, 2017 — As the broadcast industry prepares to convene at the 2017 NAB Show next week in Las Vegas, GatesAirannounces that Ernesto Fajardo has joined the sales team as Sales Director for the Caribbean and Latin American (CALA) region. The appointment represents the first phase inalong-term, strategic GatesAir initiative to invest in new resources throughout the region. This includesalarger network ...
968 ၏စာမျက်နှာ 2,359«ပထမဦးစွာ...940950960«966967968969970»9809901,000...နောက်ဆုံး»